Magnetik Name Tags - China Ningbo enweghị
Magnetik Name Baajị -akpọ magnetik baajị ma ọ bụ magnetik aha mkpado. Ọ mejupụtara abụọ iberibe. The elu ibe bụ ígwè efere ma ọ bụ plastic na abụọ-kwadoro teepu. The n'ime ibe bụ abụọ ma ọ bụ atọ super ike neodymium nju.
Magnetik aha baajị agụnye metal aha baajị, plastic aha baajị na ahaziri aha baajị.
atụmatụ High remanence, coercive ike, elu ike na nju ga mbà. N'adịghị ka mkpachị ma ọ bụ mkpọ, magnetik aha baajị gaghị emerụ gị anụ ma ọ bụ uwe. Ojiji Gbakwunye elu ibe gị aha baajị ma ọ bụ kaadị azụmahịa na-etinye ya n'èzí gị uwe. Mgbe ahụ na-etinye n'ime otu n'ime uwe gị. Easy iji.
Ahaziri aha baajị dị.
Open na Download ngwaahịa katalọgụ nke magnetik aha baajị
Previous: ite nju
Osote: nyagide nju